थर्मोस्ट्याट र रेडिएटरहरूमा ब्ल्याक फ्राइडे २०२१: उत्कृष्ट प्रस्तावहरू
थर्मोस्टेटहरू, रेडिएटरहरू, र तपाईंको घर तातो गर्न अन्य वस्तुहरूमा ब्ल्याक फ्राइडे सम्झौताहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? यहाँ ठूलो दिन आउनु अघि उत्कृष्ट प्रस्तावहरूको चयन छ ताकि तपाईं अहिले बचत गर्न सक्नुहुन्छ:
कालो शुक्रबार बिक्रीमा स्मार्ट थर्मोस्टेटहरू
टेडो ° थर्मोस्टेट ...
ब्ल्याक फ्राइडेमा मूल्य घटाउने WiFi थर्मोस्टेटका ब्रान्डहरू:
यस वर्षको ब्ल्याक फ्राइडेमा तपाईंले स्मार्ट थर्मोस्टेटहरूमा मोलतोलहरू पाउनुहुनेछ सबै भन्दा राम्रो ब्राण्ड, जस्तै:
ब्ल्याक फ्राइडे प्रस्ताव
यो स्मार्ट घर र वातानुकूलन मा युरोपेली नेताहरु मध्ये एक हो। यो कम्पनी 2011 मा म्युनिख, जर्मनी मा स्थापित भएको थियो, र त्यसपछि यो आफ्नो गुणस्तर उत्पादन, आराम, ऊर्जा बचत र उन्नत प्रविधि को लागी प्रतिष्ठा मा बढ्दै रोकिएको छैन। यदि तपाई घरको लागि राम्रो उपकरण खोज्दै हुनुहुन्छ भने सधैं सही तापक्रम कायम राख्नको लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक।
फ्रान्सेली कम्पनी पनि उद्योगको सबैभन्दा प्रशंसित स्मार्ट होम उपकरण निर्माताहरू मध्ये एक हो। यो कम्पनी पनि २०११ मा स्थापना भएको थियो, र यसका उत्पादनहरूमा मौसम सेन्सरहरू, सुरक्षा क्यामेराहरू, धुवाँ डिटेक्टरहरू, स्मार्ट थर्मोस्टेटहरू सम्मका सबै कुराहरू समावेश छन्। सबै धेरै आरामदायी जीवन र कुशल ऊर्जा खपत तिर उन्मुख।
हनीवेल होम Y3C710RFEU ...
यो अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि पुरानो चिनजान छ । यो उपभोक्ता उत्पादनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला र बुद्धि र सैन्य क्षेत्रहरु को लागी समर्पित छ। यो सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा अनुभवी निर्माताहरू मध्ये एक हो र अब यसको आफ्नै स्मार्ट यन्त्रहरू र थर्मोस्टेटहरूको साथ स्मार्ट घरमा छलांग पनि गरेको छ।
अमेरिकी विशाल गुगलले पनि आफ्नै ब्रान्डको स्मार्ट थर्मोस्टेटहरू सिर्जना गरेको छ। थर्मोस्ट्याट प्रयोग गर्नको लागि सरल, न्यूनतम उपस्थितिको साथ, र प्रभावकारी रूपमा तापक्रम नियन्त्रण गर्न ठूलो क्षमताहरूको साथ। थप रूपमा, तपाइँ यसलाई तपाइँको मोबाइल उपकरणहरू वा PC बाट, साथै Google सहायक द्वारा नियन्त्रण समर्थन गर्ने मोडेलहरूमा आवाज आदेशहरू मार्फत धेरै सजिलै र आरामसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्ल्याक फ्राइडेको लागि बिक्रीमा अन्य तताउने उत्पादनहरू
Orbegozo RF 1500 रेडिएटर ...
कालो फ्राइडे के हो
ब्ल्याक फ्राइडे, स्पेनिशमा "ब्ल्याक फ्राइडे" को रूपमा अनुवाद गरिएको, एक घटना वा हो दिन जसमा हामी सबै प्रकारका छुटका उत्पादनहरू फेला पार्न सक्छौं व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि व्यापारमा। उहाँ संयुक्त राज्यमा जन्मनुभएको थियो, र धन्यवाद दिन पछि मनाइन्छ। उहाँको इरादा हामीलाई उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो, विशेष गरी पहिलो क्रिसमस खरिदहरू गर्न। यस कारणका लागि, यो भनिन्छ कि ब्ल्याक फ्राइडे क्रिसमसको अवधि सुरु हुन्छ, विशेष गरी हामीले तपाईंको खरिदहरू गर्ने समय।
त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न को लागी कि ब्ल्याक फ्राइडे हो बिक्री को एक दिन, जसमा छूट धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र कुन स्टोरहरू पार्टीमा सामेल हुन्छन्, आजकल यो अनौठो छ कि केहि गर्दैनन्, विशेष गरी यदि यो न्यूनतम महत्त्वपूर्ण छ। Amazon, El Corte Ingles वा Apple Store जस्ता स्टोरहरू केही उदाहरणहरू हुन्।
कहिले ब्ल्याक फ्राइडे २०२१ मा मनाइन्छ
हामीले भर्खरै उल्लेख गरेझैं, ब्ल्याक फ्राइडे संयुक्त राज्यमा थैंक्सगिभिङको भोलिपल्ट मनाइन्छ, जुन बिहीबार पर्छ। थप विशेष रूपमा, यो नोभेम्बरको अन्तिम बिहीबार हो, त्यसैले ब्ल्याक फ्राइडे त्यही महिनाको अन्तिम शुक्रबार मनाइन्छ। २०२१ मा, त्यो दिन शुक्रबारसँग मेल खान्छ नोभेम्बरको लागि 26.
तर व्यक्तिगत रूपमा म यसबारे केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु। हो, शुक्रबार मात्रै चर्चा हुन्छ, तर केही पसलहरूले प्रस्ताव विस्तार गर्न सक्छन्, जसको मतलब 26/11 अघि र पछि हेर्नु राम्रो विचार हो। वास्तवमा, र यद्यपि यो लेख यसको बारेमा होइन, निम्न सोमबार साइबर सोमबार हो, त्यसैले त्यहाँ व्यवसायहरू छन् जसले एक पुल बनाउँछ र सप्ताहन्तमा प्रस्तावहरू प्रस्ताव गर्दछ। सिद्धान्तले भन्छ कि साइबर सोमबार हामी इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुहरूमा मात्र सम्झौताहरू फेला पार्छौं, तर यसले नोभेम्बर 27 र 30, 2021 मा कुनै पनि व्यवसायको मूल्यहरू जाँच गर्न उत्तम हुन्छ।
ब्ल्याक फ्राइडेमा रेडिएटर वा स्टोभ किन्ने राम्रो अवसर किन हो
ठिक छ, यदि प्रश्न किन यो बिक्री दिनमा किन्नको लागि राम्रो अवसर हो भने, जवाफ सरल छ: हामी कम तिर्न जाँदैछौं। छुटको प्रतिशत ब्रान्ड र यसलाई प्रदान गर्ने व्यवसायमा निर्भर हुनेछ, तर यदि यो यस्तो लोकप्रिय दिन हो भने यो छ किनभने छूटहरू सामान्यतया महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। वास्तवमा, यस प्रकारका छुटहरू समान दिनहरूमा मात्र फेला पर्नेछ, जस्तै भ्याट बिना दिनहरू, साइबर सोमबार वा अमेजन प्राइम डे, यद्यपि पछि मात्र प्रसिद्ध अनलाइन स्टोर द्वारा प्रस्ताव गरिएको छ।
यो पनि ब्ल्याक फ्राइडे उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छ यो एक सामान्य बिक्री दिन होइन फेसन वस्तुहरू जस्तै। कपडाको बिक्रीमा हामी सामान्यतया फेला पार्छौं जुन तिनीहरूले सिजनमा बेच्न सकेनन्, त्यसैले, सबै भन्दा राम्रो अवस्थामा, हामी एउटा कपडा किन्नेछौं जुन अब सबैभन्दा हालको छैन। यो ब्ल्याक फ्राइडे मा मामला होइन, एक दिन जब हामीले देख्ने मात्र परिवर्तन घटेको मूल्य हुनेछ। लेखहरूबाट सुरु हुने र तिनीहरूको ग्यारेन्टीको साथ समाप्त हुने अरू सबै, बाँकी वर्षको लागि समान हुनेछ।
माथिको व्याख्या गरिसकेपछि, हामीले पनि कुरा गर्नुपर्छ सय छुटको लागि यति धेरै, तर यो कसैको अनुमान हो। समयमै फर्केर हेर्दा, म पुष्टि गर्न सक्छु कि त्यहाँ उत्पादनहरू छन् जसमा छुट एक यूरो 20 हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, तर अन्य अवस्थामा छुटहरू अपमानजनक छन्, यति धेरै कि म 60 को छुट हेर्न आएको छु। Amazon जस्ता पसलहरूमा %। यो सत्य हो कि यो उत्कृष्ट ब्रान्डको उत्कृष्ट उत्पादनमा परेको छैन, तर आधाभन्दा कम आरआरपी तिर्नुलाई म राम्रो व्यवसाय भन्छु।
किन ब्ल्याक फ्राइडेमा स्मार्ट थर्मोस्टेट किन्नु उचित छ?
स्मार्ट थर्मोस्टेट ल्याउँछ तपाईंको घरमा वातानुकूलित व्यवस्थापनको लागि नयाँ आयाम, सिरी, अमेजन एलेक्सा, वा Google सहायक जस्ता भर्चुअल सहायकहरूसँग एकीकरणको सम्भावनाको साथ आवाज आदेशहरूको साथ तापक्रम नियन्त्रण गर्न। तिनीहरूले तपाईंलाई सधैं सही तरिकामा कोठाको हालको तापक्रम प्रस्ताव गर्नेछन्, र तपाईंले मोबाइल एपहरूमा ऊर्जा र तथ्याङ्कहरूको विस्तृत रेकर्ड राख्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तापक्रम नियन्त्रण गर्नु भनेको बिजुलीको बिलमा धेरै पैसा बचत गर्नु हो ऊर्जा कुशल सधैं प्रत्येक क्षणको वर्तमान अवस्था र उपयुक्त समयमा तापमान समायोजन। थप दिगो र वातावरण मैत्री तरिकामा ऊर्जा प्रयोग गर्ने तरिका।
Un तपाईं जहाँ भए पनि आफ्नो घर ताप नियन्त्रण गर्नुहोस्, यी यन्त्रहरूको इन्टरनेट जडानको लागि धन्यवाद, ताकि जब तपाईं घर पुग्नुहुन्छ यो तपाईंले चाहेको तापक्रममा हुन्छ। र सबै एक धेरै सरल स्थापना संग।
तर स्पष्ट रूपमा यी स्मार्ट थर्मोस्टेटहरू महँगो हुन सक्छन्, मूल्य $ 100 वा केही मोडेलहरूमा बढी। जे होस्, ब्ल्याक फ्राइडे संग तपाईंले तिनीहरूलाई साँच्चै महत्त्वपूर्ण बिक्रीको साथ पाउनुहुनेछ, गर्न एक सौदा मूल्य मा एक प्राप्त गर्नुहोस्.
जाडोमा न्यानो अप गर्ने कुन उत्पादनहरू तपाईंले ब्ल्याक फ्राइडेमा किन्न सक्नुहुन्छ
स्मार्ट थर्मोस्टेट प्रयोग गरिन्छ तापमान नियमित गर्नुहोस् र, थप रूपमा, यसले स्मार्ट प्रकार्यहरूसँग गर्छ। यस प्रकारको थर्मोस्ट्याटहरू मध्ये सबैभन्दा व्यापक यो हो कि तिनीहरू प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, जसले तिनीहरूलाई मात्र सुरु गर्नेछ जब हामीले यसलाई संकेत गर्छौं र कम ऊर्जा खपत गर्छौं। अर्कोतर्फ, तिनीहरू बौद्धिक छन् भन्नाले सामान्यतया हामीले तिनीहरूलाई टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने हो, जसको लागि हामीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्छौं, यदि यसले त्यो सम्भावना प्रदान गर्दछ, वा स्मार्टफोनबाट जस्तै आईफोन वा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएको स्मार्टफोनबाट। । सबै सम्भावनाहरूमा, व्यापारीहरूले ब्ल्याक फ्राइडेमा धेरै स्मार्ट थर्मोस्टेटहरू प्रस्ताव गर्नेछन्।
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि तिनीहरू सबै भन्दा ग्लैमरस ताप उपकरणहरू होइनन्, तर तिनीहरूले पूर्ण रूपमा काम गर्छन्। इलेक्ट्रोनिक रेडिएटरहरूको डिजाइन तातो पानीसँग काम गर्नेहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर यी तिनीहरूले बिजुली संग काम गर्छन् र हामी तिनीहरूलाई कुनै पनि आउटलेटमा जडान गर्न सक्छौं। तिनीहरू आकर्षक ग्याजेटहरू होइनन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, तिनीहरू अरूहरू जत्तिकै लोकप्रिय छैनन्, जसको मतलब हामीले ब्ल्याक फ्राइडेमा फेला पार्ने छुट हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बढी छ।
Orbegozo एच 55 काठ स्टोभ ...
म, जो त्यति पुरानो होइन, मलाई लाग्छ कि मलाई याद छ कि मैले मेरो सम्पूर्ण जीवनमा एउटा मात्र वास्तविक ब्राजियर देखेको छु, र त्यो घरमा थिएन। मेरो पुस्ताका मानिसहरूको लागि, द क्लासिक हीटर जीवनकालको स्टोभ हो, यद्यपि तिनीहरू धेरै मोडेल वा संस्करणहरूमा उपलब्ध छन्। हामीले भेट्टाउन सक्ने ती मध्ये एउटा भनेको ब्राजियर जस्तै डिजाइन भएको तर बिजुली प्रतिरोधको साथ हो जसले तलको टेबललाई तताउँछ। अर्कोतर्फ, त्यहाँ अरूहरू पनि छन् जसले ब्युटेन ग्याससँग काम गर्दछ र अरूलाई एक बुद्धिमान कम्पोनेन्टको साथ, जसको मतलब यो हो कि हामीले प्रोग्राम गर्न र तिनीहरूलाई टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सक्छौं, यद्यपि यो सत्य हो कि यस प्रकारको चुलो धेरै व्यापक छैन। जाडो नजिकिँदैछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हामी पक्कै अर्को ब्ल्याक फ्राइडेमा धेरै छुटका स्टोभहरू फेला पार्नेछौं।
रोवेन्टा कम्प्याक्ट पावर...
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई मेरो जीवनमा दुईवटा हीटरहरू भएको याद छ, दुबै एउटै मोडेलको। र तिनीहरूलाई प्रयास गरेपछि, मलाई लाग्छ कि तिनीहरू एक राम्रो विकल्प हुन् यदि हामी केहि खोजिरहेका छौं ठूलो परिव्यय बिना वातावरण तताउने, तर तपाईंले तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्नुपर्छ। म यो एउटा कारणको लागि भन्छु: हीटरहरूले कोठाको तापक्रम बढाउन तातो हावा प्रयोग गर्छन्, तर हामीलाई न्यानो पार्ने हावाले सही कोणमा प्रयोग गरेनौं भने हामीलाई चिसो पार्न सक्छ।
जे भए पनि, यदि हामीले तिनीहरूको राम्रो प्रयोग गर्यौं भने हामी आर्थिक रूपमा आफैंलाई तताउन सक्षम हुनेछौं, र यदि हामीले ब्ल्याक फ्राइडे जस्तो दिनमा हीटर किन्यौं भने सबै कुरा सस्तो हुनेछ।
कालो शुक्रबारको समयमा सस्तो वाइफाइ थर्मोस्टेट कहाँ किन्न सकिन्छ
उत्कृष्ट वाइफाइ थर्मोस्टेट प्राप्त गर्नका लागि अद्भुत सम्झौताहरू, सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरू तिनीहरू छन्:
अमेजन- अमेरिकी-आधारित अनलाइन बिक्री विशालसँग स्मार्ट थर्मोस्टेट ब्रान्ड र मोडेलहरूको सबैभन्दा ठूलो चयन छ। ब्ल्याक फ्राइडेमा, यी यन्त्रहरूमा अफरहरू सुरु हुनेछन्, ताकि तपाईंले तिनीहरूलाई धेरै सस्तो किन्न सक्नुहुन्छ। र सबै यस प्लेटफर्मको अधिकतम ग्यारेन्टी, खरीद सुरक्षा, र गतिको साथ। र यदि तपाईं प्राइम ग्राहक हुनुहुन्छ भने, ढुवानी लागतहरू निःशुल्क छन् र डेलिभरीहरू छिटो हुनेछन्।
चौबाटोको: स्टोरहरूको गाला चेनमा WiFi थर्मोस्टेटका केही ब्रान्ड र मोडेलहरू पनि छन्। ब्ल्याक फ्राइडेमा स्मार्ट होमका लागि यी यन्त्रहरूमा तपाईंसँग रसीला छुट प्रतिशत हुनेछ। र तपाईंले तिनीहरूलाई तिनीहरूको बिक्रीको कुनै पनि बिन्दु र तिनीहरूको वेबसाइटमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, ताकि तिनीहरूले यसलाई तपाईंको घरमा पठाउन सक्छन्।
पीसी अवयवहरू: टेक्नोलोजीमा समर्पित मुर्सियन अनलाइन वितरण श्रृंखलामा सबै प्रकारका उत्पादनहरू, उपकरणहरू र थर्मोस्ट्याटहरू जस्ता स्मार्ट होम उपकरणहरू पनि छन्। तपाईंले ब्ल्याक फ्राइडेको लागि छुटको साथ उत्कृष्ट ब्रान्ड र मोडेलहरूको राम्रो विविधता पाउन सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी अदालत: यसलाई तपाइँको घरमा अनलाइन खरिद मार्फत पठाइएको र बिक्रीको कुनै पनि नजिकको बिन्दुमा व्यक्तिगत रूपमा खरिद गर्ने बीच छनौट गर्नुहोस्। तपाईंले आज उत्कृष्ट डिलहरूका साथ केही हट र उत्कृष्ट स्मार्ट थर्मोस्टेटहरू पाउनुभएको छ।
मिडियामार्केट: अर्को विकल्प जर्मन टेक्नोलोजी चेनबाट आफ्नो थर्मोस्ट्याट किन्न हो। स्पेनका सबै पसलहरू, साथै यसको बिक्री वेबसाइटमा यी यन्त्रहरूमा छुट दिइनेछ ताकि तपाईंले एउटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
1 कालो शुक्रबार बिक्रीमा स्मार्ट थर्मोस्टेटहरू
2 ब्ल्याक फ्राइडेमा मूल्य घटाउने WiFi थर्मोस्टेटका ब्रान्डहरू:
3 ब्ल्याक फ्राइडेको लागि बिक्रीमा अन्य तताउने उत्पादनहरू
4 कालो फ्राइडे के हो
5 ब्ल्याक फ्राइडे २०२१ कहिले मनाइन्छ?
6 ब्ल्याक फ्राइडेमा रेडिएटर वा स्टोभ किन्ने राम्रो अवसर किन हो
7 किन ब्ल्याक फ्राइडेमा स्मार्ट थर्मोस्टेट किन्नु उचित छ?
8 जाडोमा न्यानो अप गर्ने कुन उत्पादनहरू तपाईंले ब्ल्याक फ्राइडेमा किन्न सक्नुहुन्छ
8.1 स्मार्ट थर्मोस्टेट्स
8.2 इलेक्ट्रिक रेडिएटरहरू
9 कालो शुक्रबारको समयमा सस्तो वाइफाइ थर्मोस्टेट कहाँ किन्न सकिन्छ